Ngwọta - DevOps - Motadata
Nleba anya maka DevOps
Nweta Okwu gbasara oge, dozie ihe omume ngwa ngwa
Kpọkọtanụ, nyochaa, chọpụta na mekọrịta ihe omume gị niile, ndekọ ndekọ na metrik na dashboard jikọtara ọnụ maka ịrụ ọrụ nwere ike ịdabere na ya.
AIOps maka inye ike Innovation
Site na ngwaọrụ nlekota DevOps nke AI kwadoro, ndị otu DevOps na-elekwasị anya karịa n'ịmepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ kama ịrụ ọrụ nkịtị. Ụlọ ọrụ na-anakwere Motadata's AIOps n'ofe ngwá ọrụ DevOps ha na-ahụ mmepụta ka mma, àgwà ngwaahịa ka mma, na oge ngwa ngwa ịzụ ahịa.
Nmeziputara nke oma
Ụlọ ọrụ na-anakwere Motadata's AIOps n'ofe ngwá ọrụ DevOps ha na-ahụ àgwà ngwaahịa ka emelitere, yana ngwa ngwa n'ahịa.
Ngwọta ngwa ngwa
Ịkwalite DevOps site na ịchọta, nyocha na idozi nsogbu ndị na-emetụta azụmahịa yana njiri mara maka oke ọrụ dị.
Chọpụta ụkpụrụ & mkpọtụ
Nleba anya bara ụba na nke a nụchara anụcha n'ofe Ngwá ọrụ DevOps
Nweta nghọta chụpụrụ data n'ofe ngwa, ndị ọrụ, akụrụngwa ngwakọ na ọrụ netwọkụ nwere ọhụhụ nchọpụta.
Nweta ikike nleba anya sara mbara n'ofe on-prem, virtualized, na akụrụngwa igwe ojii site na otu ikpo okwu jikọtara ọnụ iji wepụ silos data.
Nye ndị otu DevOps na NetOps ike ka ha nọrọ na njikọ wee hụ otu isi iyi nke eziokwu. Belata ihe egwu mwepu ọrụ na-ebuga ahụmịhe ndị ahịa ka mma.
Wetuo mkpọtụ, chọpụta Anomalies
Wetulata oke mkpọtụ na nkwuputa mmiri na-ebelata DevOps gị.
Belata nkwughachi ma kpochapụ mkpu ụgha iji lekwasị anya na ihe omume ndị dị mkpa.
Jiri amụma chọpụta anomalies ma jikọta mmetụta azụmahịa ha. Nweta nkwado buru ibu iji hazie mgbasa ozi, yana data telemetry.
Weta ihe kacha mma na DevOps Toolchain. Megharịa usoro iji kwalite nrụpụta
Wepụ usoro ntuziaka site na iji igwe runbook iji megharịa ọtụtụ ọrụ site na nkwado maka scripts SSH, PowerShell, JDBC, HTTP, go na Python.
Nweta nlele ahụike na-agụnye ngwa ọrụ gị gụnyere ngwa CI/CD, sistemu njikwa nhazi, na nyiwe ihe eji emepụta akpa.
Na-anakọta data site na ọtụtụ isi mmalite. Nyekwa ndị otu gị aka ịhazi ihe omume sitere na nhazi data dị iche iche iji chekwaa oge.
Gwakọta ihe omume nlekota oru
Nweta data niile sitere na sistemu dị iche iche wee lelee ya na mkpokọta ọnụ ọnụ maka ọnọdụ ka mma.
Nhụta ụlọ ọrụ niile
Nweta nlele zuru oke nke sistemu mgbago na mgbada iji kwalite mmekorita otu ndị otu.
Nchọpụta ihe mere amụma amụma
Chịkọta data, mekọrịta, ma chọpụta ihe adịghị mma n'ofe ngwa gị ozugbo.
Chịkọta gburugburu ebe dị iche iche wee chọpụta ọtụtụ ụdị nsogbu maka nrụzi akpaaka.
Nweta uru azụmahịa
Gbaa mbọ hụ na ntụkwasị obi ọrụ. Wetulata oge nkwụsịtụ na-enweghị atụmatụ site na iji nhazi usoro atụmatụ atụmatụ.
Ahụmahụ ndị ahịa ka mma
Wepụ ndị otu DevOps gị n'ọrụ mmejọ na-adịkarị mfe ma mee ka ha lekwasị anya n'ịkwalite ahụmịhe ndị ahịa.
Njikwa Project Vs. Njikwa ọrụ
Motadata na GITEX Teknụzụ Izu 2021
ITAM vs ITSM - Kedu ihe dị iche?
Mmetụta AI na ML na ITSM nwere 10 Real World U ...